XOG: Waqtiga uu dhacayo saxiixa iibka AC Milan oo la helay?! – Gool FM
(Milano) 20 Feb 2017 – Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Sino-Europe Sports ay bixin doonto lacagta ka harsan iibka AC Milan oo dhan €320m iyagoo kooxda la wareegaya 1-da Maarso, taasoo 2 maalmood ka horreeysa waqtigii horay loo hadal hayay.
Dallada Chinese-ka ah ee iibsanaysa Rossoneri, ayaa dhowr mar oo hore dib u dhacyo ku yimaaddeen kaddib markii ay xilligii lagu heshiiyay ku heli wayday rukhsad ay lacagta Milan lagu iibsanayo uga saarto dalkaasi Shiinaha, balse haatan waxay u muuqataa inay wax kastaahi diyaar yihiin, iyadoo xalay aad loo hadal hayay inuu Berlusconi daawaday kulankiisii ugu dambeeyay ee San Siro ka dhaca isagoo madaxwayne ah.
Sida uu dhigayo weriyaha Sky ee Peppe Di Stefano, lacagta waxaa laga soo xawili doonaa Shiinaha iyadoo iman doonta Luxembourg bishan Febraayo marka ay tahay 27 ama 28, kahor inta aysan gelin khasnadda Fininvest inta u dhaxaysa 1-da ama 3-da Maarso.
MilanNews ayaa rumaysan in maalinta muhimka ihi ay noqon doono 1-da Maarso, iyagoo sheegaya in shir jaraa’id lagu qaban doono Arcore, halkaasoo ay isku casili doonaan la guddoomiyayaasha Barbara Berlusconi iyo Adriano Galliani, markaasoo si rasmi ah loogu dhawaaqi doono in Marco Fassone uu noqon doono guddoonka cusub.
Waxaanse la hubin xilliga la qaban doono shirka jaraa’id, waayo sida horay loo qorsheeyay 18.00 ama 19.00 dalka Shiinaha waa saq-dhexe.
TOOS u daawo: Sutton vs Arsenal - LIVE (Shaxda sugan)